Guddoomiyihii hore Gobolka Banaadir oo soo dhoweeyay qodobadii ka soo baxay Shirka Mudullood - Jowhar Somali news Leader
Home News Guddoomiyihii hore Gobolka Banaadir oo soo dhoweeyay qodobadii ka soo baxay Shirka...
Guddoomiyihii hore Gobolka Banaadir oo soo dhoweeyay qodobadii ka soo baxay Shirka Mudullood
Guddoomiyihii hore Gobolka Banaadir ahaana Duqii hore ee Muqdisho Taabit Cabdi Maxamed ayaa soo dhoweeyay qodobadii ka soo baxay Shirkii wadatashiga Beelaha Mudullood ee maalintii shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho.
Taabit Cabdi oo ah Hoggaamiyaha Xisbiga Awoodda Shacabka ayaa sheegay in shir walba oo ay isugu timaado bulshada Soomaaliyeed uu xambaarsan yahay wanaag iyo isku heynta Soomaali weyn.
Halkan hoose ka akhriso qoraalka Taabit
Shir walba oo ay bulshada Soomaaliyeed isugu timaado wuxuu xambaarsan yahay wanaag iyo isku heynta Soomaali weyn. Si taas la mid ah Shirkii Wadatashiga iyo Is-cafinta Mudulood ee Muqdisho ku soo idlaaday wuxuu iftiimiyay baahida loo qabo iney bulshadu isu wareysato si guud & si gaar ahba.
Waxaan boggaadinayaa qodobbadii kasoo baxay kulanka oo ahmiyadda saaray Dowladnimada, wadajirka iyo is-cafinta Ummadda Soomaaliyeed. Waxaan mahad ballaaran u jeedinayaa dhinacyada; Duubbabka, Dhaqanka, Culimada iyo Qaban-qaabiyayaasha shirka oo ku dadaallay inuu shirku noqdo mid Soomaaliya dan u ah.
Qodobbadii shirka ka soo baxay waxey u baahan yihiin kala xulasho iyo taabo-galin, waxaana rajeynayaa in tallooyinkii la soo jeediyay looga faa’iideysto si qarannimo leh, oo lagu kabo geedi socodka Dowladnimada iyo marxaladda lagu jiro ee kala-guurka ah.